Firefox 84 ichave yekupedzisira vhezheni yekutsigira Flash Player | Linux Vakapindwa muropa
Firefox 84 ichave yekupedzisira kutsigira Flash Player. Mushure memwedzi, hatizokwanisi kuimisazve
Kutambudzika kweFlash Player iri kureba, asi kufa kwake kuri kuswedera. Ndichiri kurangarira zvisina tsarukano apo Steve Jobs akarwisa Adobe software. Akazviitira iyo nguva yaakaburitsa iyo iPad, uye vatsoropodzi havana kumirira, vachivimbisa kuti zvinhu zvakawanda hazvingashande (kusanganisira porn). Asi nguva yakamuratidza kuti akarurama, uye kunyangwe Adobe inopa zano pamusoro pekushandisa kwayo. Iko kushandiswa hakuchazove sarudzo mune isingasviki mwedzi miviri, uye yazvino vhezheni yeMozilla's browser kuitsigira ichave iri Firefox 84.
Firefox 84 parizvino iri muMozilla beta chiteshi, uye inoramba ichitsigira Flash Player, zvirinani senge sarudzo. Iyo inotevera vhezheni, yakarongerwa Ndira 26, yatove haibvumidze kushandiswa kweFlash Player neimwe nzira. Aya ndiwo maratidziro ainoita mu kuburitsa noti yeiyo Husiku vhezheni uye, kunyangwe ichitiwo shanduko dzinogona kudzoserwa, mune iyi nyaya shanduko inopfuura yakasimbiswa.
Firefox 84 ichasvika muna Zvita 15
Muchokwadi, kusakwanisa kumisa Flash Player muFirefox 85 ndiyo yega novelty iyo inoratidzika seyepamutemo mune yayo runyorwa renhau. Ivo zvakare vakaburitsa chinyorwa uko kwavanotsanangura kuti havazi ivo chete vanoita danho iri. Adobe uye mamwe mabhurawuza achapedzawo kutsigira Flash Player mukupera kwa2020, saka kuchinjira kune imwe bhurawuza kwaisazopa chero chinhu.
Mozilla inosimbisa kuti hatizokwanisi kuishandisa kunyangwe tikamisa imwe vhezheni yebrowser kana isu tikazopera yekuvandudza Firefox 84, kubvira iyo plugin inomira kurodha zvirimo kubva muna Ndira 12, Kunge tsanangura Adobe.
Kana ari mamwe mazuva, Firefox 84 ichavhura zviri pamutemo December 15, uye masvondo mashanu gare gare Firefox 5 ichasvika nembambo yekupedzisira yebhokisi raFlash.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Firefox 84 ichave yekupedzisira kutsigira Flash Player. Mushure memwedzi, hatizokwanisi kuimisazve
Panzvimbo pekuiburitsa sesoftware yemahara, Adobe akasarudza kuiuraya: "Yangu kana hapana munhu" Tsitsi.
Manjaro 20.2 inosvika neshanduro nyowani dzePlasma, Cinnamon uye Linux 5.9
Mask yeRose: yerudo inoonekwa inoano senge hapana imwe